Maxaad samayneysaa haddii aad heshid digniin ama go'aan ku saabsan in lagaa xiray lacagta la qaato?
Marka hore waxaad naga heleysaa warqad aan kugula soo xiriireyno oo uu mararka qaarkood xitaa la socdo go’aan hordhac ah. Inta aanan gaarin go’aanka kama dambaysta ah waxaa fursad lagu siinayaa inaad soo gudbiso ra’yigaaga. Waxaad adeegsan kartaa foomka jawaabaha ee barta intarneetka, waad soo wici kartaa ama waxaad soo diri kartaa foomka ”Ka jawaab warqadda laguugula soo xiriiray go’aanka ciqaabta ama digniinta ka hor” ee aad warqadda la heleysid.
Wixii aragti ah ku soo gudbi foomka su’aalaha
Haddii aadan ku qanacsaneyn go’aanka kama dambaysta ah waxaad codsan kartaa inaan dib uga fiirsanno. Markaas waxaad buuxineysaa foomka ”Codsi dib-uga-fiirsashada go’aanka digniinta ama ciqaabta”, waadna noo soo direysaa.
Codsiga dib uga fiirsashada go’aanka